खाना खाँदा किन पानी पिउनु हुँदैन ? यस्तो छ कारण खाना खाँदा किन पानी पिउनु हुँदैन ? यस्तो छ कारण Canada Nepal
एथ्लेटिकोसँग पराजित बार्सिलोना बाहिरियो
खाना खाँदा किन पानी पिउनु हुँदैन ? यस्तो छ कारण
क्यानाडा नेपाल मंसिर १७ २०७८
काठमाडौं - धेरै मानिसहरुको खाना खाने समयमा पानी पिउने बानी हुन्छ । तर खाना खाँदा विचमा पानी पिउने बानी राम्रो होइन । यस्तो बानी तुरुन्तै बदल्नु राम्रो हुन्छ । किनकी त्यसले तपाईको स्वास्थ्यमा फाइदा गर्दैछ ।
शरिरलाई चाहिने जति पानी पिउनु राम्रो हुन्छ, भनिन्छ तर कुनै कुनै अवस्थामा पानी पिउँदा विचार पनि गर्नुपर्छ । बैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हाइड्रसन र पाचन प्रणालीलाई अति आवश्यक पदार्थ पानी हो ।
खाना खानभन्दा ३० मिनेट पहिला पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । यसरी पानी पिएमा त्यसले विचविचमा पानी पिउने बानी हट्दै जान्छ भने खाना पचाउने रसले त्यसपछि आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सक्छ ।
यदि खाना खाँदा पानी नभइ नहुने बानी छ भने थोरै पानीको सहारा पनि लिन सकिन्छ । यस्तै पानीमा कागति मिलाइएको छ भने यसबाट पाचन क्रिया छिटो हुन सहयोग गर्छ । यदि तपाईले दिनभरी एक पटक पनि पानी पिउनु भएको छैन भने खानासँग थोरै पानी पिउनु सक्नु हुन्छ किनकी शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन दिनु पनि हुँदैन ।
खाना खाँदा पानी पिएमा शरिरको मेटाबोलिज्म सुस्त हुन्छ र शरिरमा पर्याप्त उर्जा दहन हुँदैन, जसका कारण मोटोपना पनि बढ्छ । यस्तै पेटमा अम्लियपना बढ्छ । खाना खाँदा पानी पिएमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्छ र मृगौला तथा मुटुरोगका लागि जोखिम हुन्छ । यस्तै यसरी पानी पिउँदा अपच हुने, पेट दुख्ने लगायतका समस्या पनि देखा पर्छ ।
मंसिर १७, २०७८ शुक्रवार २०:५२:०१ बजे : प्रकाशित
मधुमेहका बिरामीका लागि यी दाल फाइदाजनक
काठमाडौँ। रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकभन्दा बढी देखापर्नुलाई मधुमेह भनिन्छ । रगतमा चिनीको उच्च स्तरको अर्थ रगतमा धेरै चिनी हुनु हो। जसलाई ग्लुकोज पनि भनिन्छ। रगतमा चिनीको उच्च स्तरलाई हाइपरग्लिसेमिया पनि भनिन्छ।
सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्नु मधुमेहका बिरामीका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनियन्त्रित सुगरले आँखासँगै शरीरमा धेरै असर गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सुगर लेबललाई नियन्त्रणमा राख्न बिरामीले कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको खानेकुरा खानुपर्दछ ।
मधुमेहमा दाल खानुका फाइदाहरु :-
१. दालमा प्रोटिन बढी र बोसो कम हुन्छ। त्यसैले दाल पिउने बानी बसाल्नुपर्छ
२. यसमा घुलनशील र अघुलनशील आहार फाइबर हुन्छ, जसले पाचन प्रणालीलाई सन्तुलि राख्न सहयोग पुर्याउछ ।
३. दिउँसो वा बेलुकाको खानामा दाल खाँदा कब्जियत, एसिडिटी हुँदैन ।
४. जटिल कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन भएकाले दालले रगतमा रहेको ग्लुकोजलाई तोड्ने प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ।
हाम्रो घरमा धेरै किसिमका दालहरु हुने गर्दछ, जसले हाम्रो शरिरलाई फाइदा पुर्याउने गर्दछ। तर दैनिक सेवन गर्ने दालमा हामीले के पाउने छौ भन्ने हुदैन ।
मधुमेह बिरामीले यी दाल पिउनु फाइदाजनक :-
१. काउली :- यसमा कम ग्लाइसेमिक र उच्च प्रोटीन र फाइबर हुने गर्दछ । मधुमेहका बिरामीले यसलाई सेवन गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ ।
२. चना दाल :- चना दालमा ग्लाइसेमिक इन्डेक्स ८ भन्दा कम हुन्छ . जसले सुगर लेबललाई नियन्त्रण गर्छ।
३. राजमा :- राजमा GI स्तर १९ छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले सुगर र ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
४ मूंगको दाल :- मूंगको दालमा GI ३८ हुन्छ, जुन सुगर बिरामीका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर हुन्छ जुन पाचन प्रणालीका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
पौष १५, २०७८ बिहिवार २१:३८:२६ बजे : प्रकाशित
जाडोमा रुघाले सताएमा अपनाउनुहोस् यस्तो घरेलु उपाय, नाक कसरी खुलाउने ?
काठमाडौं । मौसममा परिवर्तन आउने क्रममा धेरैलाई रुघाखोकीले सताउने गर्छ । बालबालिका, बृद्धबृद्धा, रोगीलाई मात्रै नभएर वयस्क उमेर समूहकालाई र निरोगीलाई पनि रुघाखोकीले सताउन छोड्दैन ।
जाडो मौसममा हरकोहीलाई रुघा लाग्ने हुनाले यसबाट आत्तिनु हुँदैन । तर रुघाखोकीलाई सामान्य रुपमा पनि लिन हुँदैन । सामान्य रुपमा लिइएमा गम्भीर अवस्था आउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
रुघाखोकीलाई विभिन्न घरेलु उपचार गरेर पनि ठिक गर्न सकिन्छ । तर, घरेलु उपचारबाट पनि ठिक नभएमा चिकित्सकको पनि परामर्श लिनुपर्छ । रुघालाग्दा जथाभावी खाएमा रुघा बिग्रन्छ र पिनास हुने, मासु बढ्ने, एलर्जी हुने, घाँटीसम्बन्धी रोग लाग्ने, आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने लगायतका समस्याहरु देखिन्छन् ।
रुघा लागेमा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्
- रुघा लागेको छ भने चिसो पानीले मुख धुने, नुहाउने र छुने गर्नुहुँदैन । साथै बिहानमा दौडधुप पनि गर्नुहुँदैन ।
- बढी हावा चल्ने ठाउँ, धूलो र धुँवाबाट टाढा रहनुपर्छ । चिसो हावा चलेको बेलामा बाहिर हिड्नुहुँदैन । यदि हिँड्नै परेमा न्यानो लुगा लगाउने, कान, घाँटी छोप्ने र मास्क लगाउने गर्नुपर्छ ।
- रुघा आउँदा ज्वरो आएमा घरमै आराम गरिरहनुपर्छ । यस्तो बेलामा चिसो हावामा निस्कनुहुँदैन ।
- रुघा लागेर नाक बन्द भएमा नुनपानी मनतातो गरी नाकमा ५, ६ थोपा राख्ने गर्नुपर्छ । यदि नखुलेमा तेल वा अन्य नोजल ड्रप अर्थात नाक खुलाउने औषधि प्रयोग गर्नुहोस् । नोजल ड्रप बढी उकुसमुकुस भएर सुत्न समस्या भएमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
- रुघा लागेमा दिनदिन तीन÷चार पटक तातो पानीले बाफ लिने गर्नुपर्छ । जबसम्म निको हुँदैन तबसम्म दिनको ४ पटकसम्म पाँचदेखि सात मिनेटसम्म लिनुपर्छ ।
- रुघा लागेमा बाफ मात्र होइन नाक, घाँटी, छाती र ढाडमा तातोले १५, २० मिनेटसम्म सेक्नुपछ ।
पौष १६, २०७८ शुक्रवार २१:३१:०२ बजे : प्रकाशित
पाठेघरको क्यान्सरका यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं - पुरुषलाई भन्दा बढी महिलाहरूको प्रजनन् अंगमा बढी रोग लाग्ने गर्छ । महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, डिम्बाशयको क्यान्सर र अन्य स्त्री रोगहरू हुने गर्छ ।
पाठेघरको क्यान्सर पनि महिललाई हुने ठुलो रोग हो । महिलाको पाठेघरमा हुने यो समस्याको बेलैमा उपचार गर्न नसके मृत्युको मुखसम्म पनि पुर्याउछ ।
खासमा पाठेघरमा हुने समस्या बारे समयमै जानकारी हुन नपाउँदा महिलाहरुले यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्क अनुसार हरेक ७० महिला मध्ये एक जनालाई पाठेघरको क्यान्सर हुने गर्दछ। पाठेघरको क्यान्सर बंशाणुगत पनि हुने गर्छ ।
कसरी पाठेघरको क्यान्सर महिलामा हुने गर्दछ ?
पाठेघर भित्र एउटा तह हुन्छ जसलाई फैलोपियन पनि भनिन्छ। गर्भवती भएको समयमा फैलोपियनका कोशिकाहरू असमान्य रूपमा बढ्न थालेपछि क्यान्सर हुन सक्छ। जसका कारण महिलालाई आमा बन्न नसक्ने लगायतको समस्या देखा पर्छ ।
पाठेघरको क्यान्सरको कारणहरु
१. यसको पहिलो कारण महिनावारी समयमा नहुनु साथै महिनावारीमा समस्या देखिनु हो ।
२. सेनेटरी प्याडको धेरै लामो समयसम्म प्रयोगले पनि यस्तो समस्या हुने गर्छ ।
३. बंशाणुगत ।
४. गर्भनिरोधक चक्की, धुम्रपान, मोटोपना र हार्मोनल असन्तुलनका कारण पनि यसको जोखिम बढ्छ।
पाठेघरको क्यान्सरबाट कसरी बच्ने
१. हरियो सागपात,पहेलो फलफुलहरु खाने, बाहिर बजारको खाने कुरा नखाने ।
२. सेनेटरी प्याडको धेरै लामो समयसम्म प्रयोग नगर्ने, ४(४ घण्टामा सेनेटरी प्याड फेर्ने ।
३. कपडा प्रयोग गरे पनि सफा प्रयोग गर्नु पर्दछ, कपडालाई साबुन पानिले धोएर घाममा सुकाउनु पर्दछ।
४. गर्भनिरोधक चक्की, धुम्रपान, रक्सी धेरै मात्रमा सेवन गर्नुहुँदैन ।
पौष १९, २०७८ सोमवार २१:२६:२९ बजे : प्रकाशित
# पाठेघरको क्यान्सर
स्ट्रेच मार्क्स के हो ? कस्तो अवस्थामा आउँछ ?
काठमाडौं - महिलाहरू गर्भवती भएको समयमा विभिन्न समस्याहरु पनि देखा पर्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा स्ट्रेच मार्कहरू देखिने गर्छ । महिलाहरुको पेट, स्तन, कम्मर, नितम्ब वा शरीरको अन्य ठाउँहरूमा इन्डेन्टेड स्ट्रिक्सहरू देखिने गर्छन् ।
खासमा यो अन्तिम ट्रिमिस्टरको समयमा अर्थात् गर्भवतीको अन्तिम समयमा आउने गर्दछ । स्ट्रेच मार्कहरू पीडादायी वा हानिकारक हुँदैनन्, तर केही मानिसहरूले आफ्नो छालालाई देखाउन मन पराउँदैनन्। स्ट्रेच मार्कलाई उपचारको आवश्यकता पर्दैन । यो फीका हुदै जान्छ तर पुरा रूपमा हराउन सक्दैनन्।
स्ट्रेच मार्क्सको समस्या धेरैलाई हुने गर्छ । यो समस्या आएको कसरी थाहाँ पाउने
१. पेट, स्तन, कम्मर, नितम्ब वा शरीरमा अन्य ठाउँहरूमा इन्डेन्टेड स्ट्रिक्स वा रेखाहरू आउने गर्दछ।
२. गुलाबी, रातो, कालो, नीलो रेखाहरू आउने गर्दछ।
३. उज्यालो रेखाहरू हल्का रङमा फीका हुन्छन्।
४. शरीरको ठूला भागहरू ढाक्ने गर्छ, जस्तै पेट, खुट्टा , कमर आदि
स्ट्रेच मार्क्सको कारण छाला स्ट्रेचिङ हुनु हो। यस्तो बंशाणुगत, छालामा तनावको डिग्री लगायतको कारणले आउने गर्छ । यो मनिसको हार्मोन कोर्टिसोलको स्तरले पनि भूमिका खेल्न सक्छ। कोर्टिसोल एड्रेनल ग्रंथिहरु द्वारा उत्पादित हार्मोन छालामा लोचदार फाइबर कमजोर बनाउँछ।
सहित धेरै कारकहरूद्वारा आउने गर्दछ। यो मनिसको हार्मोन कोर्टिसोलको स्तरले पनि भूमिका खेल्न सक्छ। कोर्टिसोल एड्रेनल ग्रंथिहरु द्वारा उत्पादित हार्मोन छालामा लोचदार फाइबर कमजोर बनाउँछ।
जोखिम कारणहरु :-
१. स्ट्रेच मार्क्सको व्यक्तिगत वा पारिवारिक इतिहास भएको गर्भवती हुनु, जवान हुनुहुन्छ भने आउने गर्दछ।
२. यो किशोरावस्थामा तीव्र वृद्धि, चाँडै तौल बढ्ने वा घट्ने हुने गर्दछ।
३. स्तन वृद्धि
४. व्यायाम र एनाबोलिक स्टेरोइडहरू प्रयोग गर्दै
५. कुशिङ सिन्ड्रोम वा मार्फान सिन्ड्रोम जस्ता आनुवंशिक विकार हुनु।
६. कुनै हानीकरक दवाई सेवन गर्नाले।
पौष २०, २०७८ मंगलवार २१:२७:३१ बजे : प्रकाशित
ओमिक्रोनबाट बच्न यस्ता खानेकुराहरुको सेवन गर्नुहोस्
काठमाडौं - विश्वका विभिन्न देशमा अहिले कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ । यसपटकको लहरमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भारतमा तिव्र गतिमा फैलिरहेको समाचारमा सुनिदै आएको छ । भारतमा ओमिक्रोन बढीरहदा यो नेपालमा पनि आउँदैन भन्न सकिदैन ।
नेपालमा पनि ओमिक्रोनका केही केसहरु देखिएका छन् । कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नछोड्न आग्रह गरिरहेको छ ।
कोरोनाबाट बच्न हामिले शरिरको म्युनिटी पावर बढाउनु जरुरी हुन्छ । यस भेरियन्टका लक्षण नाकबाट पानी बग्नु, टाउको दुख्नु शरीर गल्नु, हाच्छिउँ र घाँटी दुख्नु हो ।
इम्युनिटी पावर बढाउन सहयोग गर्ने खानेकुराहरु यस्ता छन्
१. घिउँ - आयुर्वेदका अनुसार शुद्ध घिउँमा बोसो नगन्य हुन्छ, जसले जाडोमा शरीरलाई न्यानो राख्छ र ऊर्जा दिने गर्दछ। दैनिक १ चम्चा घिउँ खाँदा रोगबाट इम्युनिटी पावर क्षमता पनि बढ्छ । यसलाई दाल, भात, रोटी वा तरकारीसँग खान सकिन्छ ।
२. गुलियो आलु - विज्ञहरुका अनुसार आलुमा भिटामिन–सी पाइन्छ । जसले शरिरको इम्युनिटी पावर क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । साथै यसमा बिटा क्यारोटिन पनि हुन्छ जुन राम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
३. अमला - अमला भिटामिन-सी को एक उत्कृष्ट स्रोत हो । जुन प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनको लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जाडोमा यसको सेवनले रुघा, खोकीबाट बच्न पनि सहयोग गर्दछ । यसलाई जुस, अचाररूपमा लिन सकिन्छ।
४. सखर - सखर जाडो मौसममा सबै भन्दा धेरै सेवन गर्ने एकमात्र खानेकुरा हो। सखरलाई दैनिक रुपमा सेवन गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने गछ । साथै सखर सुगर लागेको बिरामीहरु पनि सजिलै सेवन गर्न सक्छन। यसका साथै खानापछि एक टुक्रा गुड खाँदा पाचन प्रणाली पनि स्वस्थ रहन्छ ।
५. अमिलो फलफूल- जाडोमा सुन्तला, मौसमी, कागती जस्ता अमिलो फलफूल सेवन गर्दा धेरै फाइदा हुने गर्दछ । यी अमिलो फलफूलमा भिटामिन(सीको मात्रा धेरै हुने गर्दछ। जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ।
पौष २१, २०७८ बुधवार २२:०२:३९ बजे : प्रकाशित
# नयाँ भेरिअन्ट ओमिक्रोन
शरीरमा प्रोटिनको कमी पूरा गर्न घरमै यसरी बनाएर खानुहोस् प्रोटीन पाउडर
काठमाडौं - हाम्रो शरीरलाई सधै स्वस्थ र बलियो राख्न नियमित तागतिलो खानेकुराहरुको सेवन गर्नु पर्नेहुन्छ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न हामिले धेरै प्रकारका भिटामिन, प्रोटिन भएका खानेकुराहरु खानुपर्छ ।
यसका लागि मानिसहरु बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने भिटामिन, प्रोटिन पाऊडर प्रयोग गर्ने गर्छन् । बजारमा पाइने सबै पाउडर हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भन्ने छैन।
मानिसको शरीरमा प्रोटिनको कमी पूरा गर्न आजकल मानिसहरु विज्ञको सल्लाह बिना यसको सप्लिमेन्ट चक्की खान थालेका छन् । विशेषगरी जिम जाने वा शरीर बनाउन चाहनेले डर नभई यसको सेवन गर्छन् । तर प्रोटिन पाउडरको सेवनले पनि शरीरलाई हानि पुर्‍याउँने गर्छ । त्यसैले हामिले बजारको भन्दा घरमै प्रोटिन पाउडर बनाएर सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार घरमै बनाइने प्रोटिन पाउडर प्राकृतिक सामग्रीको प्रयोग भएकाले स्वस्थ र सुरक्षित हुन्छ । एकै समयमा, प्रोटिन पाउडर किन्न अलि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ किनभने थाहा नहुन सक्छ।
प्रोटीन पाउडर बनाउनको लागी चाहिने सामग्री :- ओखर - १०० ग्राम, बदाम - १०० ग्राम, काजू - १०० ग्राम, कद्दू बीउ - १०० ग्राम, सोयाबिन - १०० ग्राम, मखाना - १०० ग्राम, सेतो तिल - १०० ग्राम
बनाउने तरिका :-
१. . सबैभन्दा पहिले सबै चीजहरू बराबर मात्रामा लिएर राम्ररी सफा गर्नुहोस्।
२. अब यसलाई भाडोमा राख्नुहोस् र हल्का आगोमा भुट्नुहोस् अनि कम्तिमा ३-४ मिनेटको लागि रातो हुन जेल भुट्नु होस्।
३. यसलाई कम्तिमा ३० मिनेटको लागि चिसो हुन दिनु पर्दछ।
४ . अब सबै सामग्रीहरूलाई मिक्सरमा राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई राम्ररी पीस्नुहोस्।
५ . मिठासको लागि तपाईं स्वाद अनुसार चिनी पाउडर, पाउडर गरिएको चिनी क्यान्डी थप्न सक्नुहुन्छ।
पौष २६, २०७८ सोमवार २१:३७:०१ बजे : प्रकाशित
# प्रोटीन पाउडर